अचम्म को देश, जहाँ महिलाले पुरुषलाई जनवार झैं व्यवहार गर्छन् - IAUA
अचम्म को देश, जहाँ महिलाले पुरुषलाई जनवार झैं व्यवहार गर्छन्
ramkrishna November 16, 2017	interesting
हाम्रो समाज पितृसतात्मक छ । यो संरचनामा महिलामाथि पुरुष हावी हुने गरेका छन् । तर, दुनियाँमा यस्तो पनि समाज वा मुलुक छ, जहाँ महिलाको अगाडि पुरुष निरिह र बामपुड्को लाग्न सक्छ । उक्त मुलुकमा महिलाहरुको नोकर बन्नुपर्छ, पुरुषले । र, पुरुषलाई त्यही कामका लागि महिलाले अश्रय समेत दिने गर्छन् ।
– यस देशको स्लोगन छ, ‘वुमन ओभर मेन’ । यहाँको शासनसत्ता महिलाकै हातमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् – यी युबक ले गरे दाबी – मंगल ग्रहमा जमिनमुनि छन् मान्छे !
– यो देश ‘अदर वल्र्ड किङडम’ हो, जो १९९६ मा युरोपियन देश चेक रिपब्लिकबाट छुटिएर बनेको थियो ।
– यस देशकी रानी प्याटि्रशिया हुन्, जसको यहाँ एकछत्र राज चल्छ ।
– अहिलेसम्म यसलाई अन्य मुलुकले ‘छुटै मुलुक’को मान्यता दिएको छैन । यस देशको राजधानी ब्ल्याक सिटी हो ।
– चेक रिपब्लिकमा अवस्थित यो देशको आफ्नो झन्डा, पैसा, पासपोर्ट र पुलिस फोर्स छ ।
– यहाँका मुल नागरिक केवल महिला हुन् । यहाँ पुरुषलाई जनवारलाई जस्तै व्यवहार गरिन्छ ।
– पुरुषलाई यहाँ नोकरभन्दा माथिल्लो दर्जा दिइदैन । यस मुलुकको निर्माणमा दुई मिलियन डलर खर्चिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् – स्वयम्भुमा एक्कासी ढुँगामा यसरी बल्यो आगो, भुकम्पको भन्दा ठूलो विपत्ति आउन लागेको भन्दै आत्तिए पुजारी !
महारानीका लागि कुर्सी
– यो अनौठो देशमा दोस्रो मुलुकबाट आउने पुरुषले रानीका लागि कुर्सी वा सोफा बनाउनुपर्छ ।
– यदि नोकरले मदिरापान गर्न चाह्यो भने तिनको मालिकनीको खुट्टामा पोखाइन्छ र त्यसैमा चाटेर खानुपर्छ ।
– महारानी प्याटि्रशियाले आफ्नो मर्जी अनुसार देशको कानुन बदल्न सक्छिन् ।
– उनले यस देशमा नागरिकता लिन चाहने महिलाका लागि केहि नियम बनाएकी छिन् ।
– कसैले आफ्नो सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क गर्ने उमेरमा पुग्यो भने उसले कम्तीमा एक जना पुरुष नोकर राख्नुपर्ने हुन्छ ।
– कुनैपनि महिलाले कम्तीमा पाँच दिन महारानीको महलमा बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
Previous Previous post: सुन्दै अचम्म लाग्ने बलिउड कलाकारहरुको नराम्रो बानी
Next Next post: लसुनसंग जोडिएका १० अचम्म लाग्दा तथ्य